घटस्थापनाकै दिन किन राखिन्छ जमरा ? यस्तो छ महत्व…… – Interview Nepal
घटस्थापनाकै दिन किन राखिन्छ जमरा ? यस्तो छ महत्व……
काठमाण्डौँ, कार्तिक १
घटस्थापनाको दिनदेखि नवरात्रि आरम्भ हुन्छ । यसै दिन दुई महत्वपूर्ण कृत्य सम्पादन गरिन्छ । पहिलो कृत्य यस दिन जमरा राखिन्छ भने अर्को कृत्य यसै दिन घटस्थापना गरी देवी(देवताको आवाहन पनि गरिन्छ ।
Posted in अचम्मका कुरा, जिवनसैली, टिप्स, ब्यानर समाचार, समाज